Fifohazam-panahy lehibe faharoa - Wikipedia
Ny fifohazam-panahy lehibe faharoa dia fifohazam-panahy prôtestanta niseho tamin' ny taonjaro faha-19 tao Etazonia. Atao hoe Second Great Awakening izany amin' ny teny anglisy. Ny fifohazam-panahy lehibe faharoa, izay nampiely ny fivavahana kristiana tamin' ny alalan' ny toriteny mamohafoha sy mampihetsi-po, dia niteraka fihetsiketseham-panavaozana maro. Io fifohazam-panahy io dia singa manan-danja indrindra teo amin' ireo fihetsiketsehana ireo sady nahasarika mpiova finoana an-jatony maro ho amin' ny antokom-pinoana prôtestanta vaovao. Ny fiangonana metôdista dia nampiasa mpitodra fivavahana mitaingin-tsoavaly (anglisy: circuit riders) mitety tanàna mba ho afaka mitory amin' ireo olona any amin' ny faritra an-tsisin-tany. Nitarika ho amin' ny vanim-potoan' ny fanitsiana (fanavaozana) ara-piarahamonina talohan' ny ady sady nanantitra ny famonjena amin' ny alalan' ny institosiona izany. Ny fitobaky ny hafanam-po ara-pivavahana sy ny fifohazam-panahy dia nanomboka tao Kentucky sy tao Tennessee tamin' ireo taona 1790 sy tamin' ny fiandohan' ireo taona 1800 tao amin' ireo Presbiteriana sy Metôdista ary Batista. Ny fifohazam-panahy dia nitondra fampaherezana manoloana ny tsy fahafantarana marina ny halehan' ny fiainana vokatr' ireo fiovana ara-piarahamonina sy ara-pôlitika tany Amerika.
Nitarika ho amin' ny fanorenana kôlejy sy seminera ary fikambanana misiônera malaza maro izany. Niteraka fanovana lehibe teo amin' ny tontolon' ny fivavahana tamin' ireo zanatany tany Amerika ny fifohazam-panahy lehibe. Maro ny olon-tsotra namporisihina mba hanam-pifandraisana mivantana manokana amin' Andriamanitra, fa tsy hiankina amin' ny tompon' andraiki-pivavahana. Nandroso haingana ny antokom-piangonana vaovao toy ny metôdisma sy ny batisma. Na dia nanambatra ny zanatany sy nanetsika ny fitombon' ny fiangonana aza izany fihetsiketsehana izany dia niteraka fisarahana koa teo amin' ny mpanohana sy ny mpanohitra an' izany.
Mametraka ny fifohazam-panahy lehibe faharoa ao amin' ny toe-javatra manodidina ny fifohazam-panahy lehibe voalohany (tamin' ireo taona 1730 sy 1750) sy ny fifohazam-panahy lehibe fahatelo (tamin' ny faramparan' ireo taona 1850 sy ny fiandohan' ireo taona 1900). Ny fifohazam-panahy lehibe faharoa sy fahatelo dia ampahany ao ny fihetsiketsehana ara-pivavahana rômantika izay lehibe lavitra nahenika an' i Angletera sy Ekôsy ary Alemaina.
Maro ireo firehana ara-pivavahana vaovao niforona nandritra ny fifohazam-panahy lehibe faharoa, ka anisan' izany ny adventisma sy ny dispensasiônalisma ary ny fihetsiketsehan' ny Olomasin'ny Andro Farany. Nanjaka tao amin' izany fifohazam-panahy lehibe faharoa izany ny pôstmilenarisma sy ny restaorasiônisma.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifohazam-panahy_lehibe_faharoa&oldid=1012696"